Ambohimangakely : Fivarotana telo nasesin’ny jiolahy notafihana – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2021 → octobre → 9 → Ambohimangakely : Fivarotana telo nasesin’ny jiolahy notafihana
Ambohimangakely : Fivarotana telo nasesin’ny jiolahy notafihana
Redaction Midi Madagasikara 9 octobre 2021 0 Commentaire
Na dia nanao izay danin’ny kibony mihitsy aza ireto andian-jiolahy, nanesy ireo mpivarotra sendra azy ireo, tsy niandry ela akory ny valin-kafatra avy amin’ny zandary, notarihin’ny kaomandin’ny tobim-paritra Ambohimangakely. Ora vitsy monja taorian’izay mantsy dia voasambotra ny sasany tamin’ireo mpanafika.
Afakomaly hariva, tokony ho tamin’ny enina ora mahery kely tany, raha mbola nisomebiseby sy nifaneratsaka ny olona, no nitrangana fanafihana mitam-piadiana tetsy amin’ny Ambohimangakely, ampitan’ny tetezana raha ho hihazo ny RN2. Araka ny fitantaran’ireo teny an-toerana dia fivarotana telo be izao no indray nasesin’izy ireo notafihana. Tsy nisy ny poa-basy, ny naratra na ny aina nafoy, na izany aza anefa, vola maromaro ihany no lasan’ireo olon-dratsy. « Tsy haiko intsony izay isany fa toy ireny olona mibosesika hividy zavatra ireny izy ireo. Kanjo ny roa lahy avy hatrany dia nanatona sy nivadika taty ambadiky ny « caisse » namoaka basy ary nitaky ny vola rehetra, ireo ambiny kosa niandry teny ivelany. Nisy ireo namany nijorojoro tato anatiny, niambina sy nanendaka ireo mpanjifa tavela teo » hoy ny renim-pianakaviana iray, anisan’ireo tompon’ny tsena voatafika. Ho an’ity tsena ity dia voalaza fa ny vola matiny rehetra nandritry ny andro, niampy « credit » maromaro no lasan’ireo olon-dratsy. Nivoaka moramora izy ireo nony avy eo. Tsy vitan’izay anefa fa teny an-dalana hitsoaka no mbola namatratra tamin’ny mpivaro-damba iray sendra ny lalany izy ireo. « Voambana tamin’ny antsy teo amin’ny tendany ny anadahiko ka tsy afaka nanao inona. Lasany ny vola rehetra, an-tapitrisany saika hangalàna entana sy ireo « versement » nandritry ny andro » araka ny fitantaran’ny mpivarotra.
Araka ny fanazavàna azo avy amin’ny zandary dia am-polony tany ho any ireo olon-dratsy, nirongo basy poleta vita gasy sy zava-maranitra isan-karazany. Karazan’ny fiantsiana mihitsy ny zava-nitranga raha ny tsapa teny an-toerana ary tena sahy ireo olon-dratsy. Samy tsy lavitry ny biraon’ny fokontanin’i Tanambao izy ireo ary ny iray aza dia ao ambanin’izany biraom-panjakana izany mihitsy. Tsy lavitra eo koa no misy zandary maromaro manao fisafoana. Ireto farany no avy hatrany dia nahetsika raha vao nisy nampandre fotsiny ihany izy ireo. Napandrenesina ihany koa ireo zandary manodidina. Raikitra teo ny fifanenjehana. Nihazo an’Ankadindambo iny izy ireo ary tsy ela dia voasambotra ny efatra tamin’ireo mpanafika. Nahitàna basy vita gasy iray ihany koa tamin’ny lalana nitsoahan’ireo olon-dratsy, izay mbola nisy bala calibre 12 efa vonon-katifitra tao anatiny. Nentina avy hatrany tany amin’iny biraon’ny tobim-paritry ny zandary Ambohimangakely moa ireto voasambotra ireto atao famotorana. Heverina fa tsy ho ela dia ho fantatra ny namany, izay nanao izao fanafihana izao.